Mpandraharaha momba ny andraikitra sy ny fiainana Kristiana
Fivavahana & Spirituality Miaina ny finoana kristianina
Ny antony dia ny andraikitry ny tokana kristianina tsirairay
Nahoana no manan-danja amin'ny fitomboan'ny ara-panahy ny mpiara-miasa ao amin'ny kaonty?
Tsy maninona raha manambady na mpitovo ianao, dia sarotra ny mizara ny fiainanao amin'ny olona iray hafa. Ny fiainana dia toa tsotra kokoa rehefa mitazona ny antsipirian'ny saintsika, ny fontsika, ny nofintsika, ary ny fahotana voaroaka ao anaty vata iray. Na dia tsy tsara ho an'ny olona aza izany, dia mety hampidi-doza indrindra ho an'ireo mpitovo izay tsy manana vady hanohitra azy ireo ary iza no afaka mitazam-potsiny amin'ny namany ny halavany mba hisorohana ny zavatra mampalahelo na mampihetsi-po.
Ny fikatsahana namana farafaharatsiny iray amin'ny antony hananana andraikitra dia zava-dehibe. Ilaintsika ny olona eo amin'ny fiainantsika izay mahafantatra antsika sy tia antsika ary hanana fahasahiana ampy hamiratra lanja ny faritra eo amin'ny fiainantsika izay mila asa. Inona no tsara amin'ity vanim-potoana ity raha mametraka ny zava-drehetra isika ary tsy mampiasa izany mba hitombo ao amin'ny fifandraisantsika amin'i Kristy?
Misy antony maro ahafahan'ny mpitovo manadihady mpiara-miasa, kanefa efatra kosa no miavaka.
Ny fitanisan-keloka dia ara-Baiboly.
"Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra." (1 Jaona 1: 9, NIV )
"Ataovy izao fanao mahazatra anao izao: Mibebaha ianareo, ary mifampivavaha mba hahafahanareo miara-miaina sy manasitrana." Ny vavaka amin'ny olona miaina miaraka amin'Andriamanitra dia zavatra manan-kery izay tokony hatao ... " (Jakoba 5: 16, MSG)
Voalaza ao amin'ny 1 Jaona fa mamela ny fahotantsika i Jesoa rehefa manambara azy ireo isika. Kanefa araka an'i Jakôba , ny fitanisan-keloka amin'ny mpino hafa dia miteraka fahagagana sy fanasitranana.
Ao amin'ny Hafatra , dia milaza amintsika ny fanaovana fitanisan-keloka "fanao mahazatra". Ny fizarana ny fahotantsika amin'ny olona iray dia tsy zavatra tena ankafizintsika ny ankamaroantsika. Ny fitadiavana olona iray azontsika itokisana dia mety ho sarotra. Na dia efa mahita olona iray aza isika, dia manalavitra ny avonavontsika sy mamela ny mpiambina antsika tsy tonga ho azy. Mbola mila miasa isika, mampiofana ny tenantsika, ary mampihatra izany matetika. Ny andraikitra dia mampisy ny fahamarinan-toetra eo amin'ny fiainantsika. Izany dia manampy antsika ho marina kokoa amin'Andriamanitra sy ny hafa ary ny tenantsika.
Angamba izany no antony mahatonga ny olona hilaza fa ny fitanisan-keloka dia tsara ho an'ny fanahy.
Mivoatra sy mihamatanjaka ny fiarahamonina.
Ao amin'ny tontolon'ny Facebook sy namana mpanaraka ny Facebook, miaina anaty kolontsaina mpinamana izahay. Saingy noho ny fijerena ny fangataham-bavaka an'ny olona amin'ny media sosialy iray dia tsy midika izany hoe ao amin'ny fiarahamonina ara-baiboly marina miaraka aminy isika.
Ny fiaraha-monina dia manambara amintsika fa tsy irery izahay, ary ny fahasahirananay, toa sarotra ho azy ireo, dia ireo hafa niady tamin'ny adidy koa. Azontsika atao ny mandeha miaraka sy mianatra avy amin'ny fandehanana amin'ny fahamasinana, ary afaka amin'ny fakam - panahy na fampitahana isika. Rehefa mavesatra na toa tsy zaka intsony ny enta-mavesatra, dia afaka mizara ny lanjany isika (Galatiana 6: 1-6).
Indraindray isika dia kamo. Izany dia mitranga. Mora kokoa ny manaparitaka rehefa tsy misy miantso antsika ary mampahatsiahy antsika mba handeha mendrika ny antso ananantsika. (Efesiana 4: 1)
"Ny vy maharanitra ny vy, dia toy izany ny olona maharanitra ny hafa." (Ohabolana 27:17)
Rehefa mamela ny hafa hitazona andraikitra isika, hanondro ireo faritra jamba, ary hiteny ny fahamarinana eo amin'ny fiainantsika, dia mamela azy ireo hanindry anay izahay, ary afaka manao toy izany koa izahay. Indray mandeha maranitra, tsy fitaovana mahery setra intsony isika, fa ireo mahasoa.
Ny "Attaboy" sy ny "tsara ho anao" dia mahafinaritra ny mandre, saingy mety ho lava sy tsy mahafa-po. Mila olona izay hijoro ho vavolombelona amin'ny fiainantsika isika, hankalaza ny porofo avy amin'ny fahasoavana , ary hampifaly antsika rehefa miala sasatra isika. Ny singa manokana dia mila mandre fa misy olona tsy ao an-jorony ihany fa miady mafy amin'ny anaran'izy ireo amin'ny vavaka . Amin'ny fiaraha-miasa tena tompon'andraikitra, ny fanenjehana sy ny fanentanana dia mazoto foana amin'ny fampaherezana sy fitiavana .
Ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra ho an'ny mpitovo kristiana dia resaka faharavana. Tsy afaka manamaivana ny halalin'ny ady atrehintsika isika raha tena maniry ny hahasoa ny fanjakan'Andriamanitra. Ilaintsika ny mahita ny fanampiana, mifanohitra, ary mandresy ny fahotana eo amin'ny fiainantsika.
Ny Fanahy Masina no manambara ireo zavatra ireo amintsika ary manome hery antsika handresy azy ireo, kanefa mampiasa ny fiarahamonintsika izy mba hanampiana antsika, hampahatsiahy antsika, hanatanjaka antsika ary hanompo antsika amin'ny diantsika.
Ny fiainana kristianina dia tsy navela hiaina irery ao am-piangonana.
Ireo tsy mpino ratsy indrindra indrindra momba an'i Jesoa
Afaka ny ho sambatra ihany ve ianao?
Aiza no ahitanao ny tarika tanora ao amin'ny Internet
Ny hadisoana momba ny finoana
Lalao baiboly ho an'ny tanora
Fampivoarana ny fiainam-bavaka amin'Andriamanitra
7 Fomba hahazoanao Baiboly maimaim-poana
Andro iraisam-pirenena ho an'ny fanompoan-tsampy ho an'ireo lehilahy kristianina
Boky Topa ho an'ny Fampandrosoana sy Fitomboana ny Tanora
Inona no atao hoe Acid glacial acid?
Ny adihevitra manohitra ny varotra malalaka
Vavaka Kristiana momba ny fankasitrahana
Famokarana biby sy antibiôtika, Hormones, rBGH
Fanitsiana chimie manomboka amin'ny taratasy M
Inona no azoko atao amin'ny diplaom-barotra?
Jeografia ho an'ny Oseana eran-tany
Pluto ao Capricorn Mitety trano: ny toetranao
Great Anime Shareables sy Memes ho an'ny Pinterest, Tumblr, Facebook ary Twitter
Ny fototry ny Waxmyrtle Atsimo
Ny Fivoahana sy ny fiandohan'ny Notochord
Fomba fitsaboana tsara indrindra ho an'ny iPhone
Mpitandrina Jeremia Steepek
Porsche, Porsche, Porsche !: Ny Tantara an'ny orinasa Porsche
Manaova mofomamy mofomamy mandripaka mampiasa gilasy maina
The Chemistry of Cookies Baking
Ireo karazana 5 karazana
Ahoana no Ataovy Ankizivavy kely eo amin'ny sambony?
Lisitry ny C sy C ++ Compilers
10 Easy Dingana ho an'ny fanomanana Paska mora
Ny hoavy manaraka amin'ny italiana
Rahoviana ny hampiasa ny alika sy ny serfa